नेपालको मुस्लिम समाज उइघुर मामिलामा किन चुप ? - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeदेशनेपालको मुस्लिम समाज उइघुर मामिलामा किन चुप ?
नेपालको मुस्लिम समाज उइघुर मामिलामा किन चुप ?
काठमाडौं । चीनले लामो समयदेखि शिन्जियाङमा रहेका उइगरहरुलाई दमन गर्ने, आतंकवाद फैलाएको आरोपमा कारबाही गर्ने, महिलाहरुलाई बच्चा नजन्माउन दबाब दिने र अस्थायी गर्भनिरोधक सामग्रीको प्रयोगका लागि दबाब दिने र हजारौंलाई नियन्त्रणमा लिने काम गरिरहेको थियो ।
सन् २०१९ मा भएको एक अध्ययन अनुसार चीनका उइगर समुदायहरुका बालबालिकालाई मुस्लिम बन्न नसकुन भनेर अभिभावक र परिवारबाट अलग गराउने अभियानसमेत चालेको थियो ।
दुईभन्दा कम बच्चा भएका महिलाहरुलाई अस्थायी साधन तथा गर्भ निरोधक साधन प्रयोग गर्न लगाउने र गर्भपतन गराउनेसम्मका गतिविधिहरु गरिरहेको जनाइएको छ । पछिल्लो समय शिन्जियाङको जन्मदर ८४ प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ ।
चीनले उइगर मुसलमानको अस्तित्व मेटाउन उनीहरुलाई धर्म त्याग गर्न लगाएको तथा उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर राखेको आरोप लाग्दै आएको समयमा अमेरिका भने कडा रुपमा प्रस्तुत भएको देखिएको छ । चीनलाई पाठ सिकाउन अमेरिकाले ‘उइगर ह्युमन राइट्स पोलिसी एक्ट २०२०’ कानुन संसदबाट पारित गरेको छ ।
यता,उइगर अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार हनन गरेको भन्दै कैयौँ पश्चिमा देशहरूले चिनियाँ अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
उइगर माथि यसरी दमन हुदाँ नेपाली मुस्लिम समुदाय चुप बसेको भनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । उइगुर मुस्लिम समुदायमाथि चीनले आफ्नो देशमा गर्दै आएको अत्याचारविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन भएको हल्ला अथवा समाचार खासै कतै पढ्न हेर्न पाइएन । नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधिहरुले चीनमा उइगुर मुस्लिम समुदायमाथि अत्याचार गरेको विषयमा चीन सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गरेको पनि खासै सुनिएको छैन ।
३० कार्तिक २०७७ मा उइगुर मुस्लिम समुदायलाई स्वतन्त्रता देउ, उइगुर मुस्लिम समुदायको मानवअधिकार बहाली गर लगायतका प्लेकार्ड र व्यानर बोकेर जमाइत उलेमा नेपाल नामक मुस्लिम संगठनले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको खबर बाहिरियो । बुझ्दै जादाँ उक्त संगठनले मोरङ, रुपन्देही, सिरहा लगायतका जिल्लामा एकैपटक प्रदर्शन गरेको रहेछ् । सबै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत उनीहरुले नेपाल सरकारलाई चीनमा रहेका उइगुर मुस्लिमहरुको मानवअधिकार रक्षाका लागि पहल गरिदिन अपिल समेत गरेका रहेछन् ।
विभिन्न जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले चीनमा मुस्लिम समुदायमाथि भएको दमनको विरोध गरेका थिए । चीनमा अहिलेसम्म १५ हजार मस्जिद भत्काइएको, शौचालयमा रुपान्तरण गरिएका लगायतका बिषय प्रदर्शनकारीहरुले उठाएका थिए । विश्वभरका मुस्लिम समुदाय किन चीनमा मुस्लिम समुदाय माथि भइरहेको अत्याचारका विरुद्ध मौन छ भन्दै उनीहरुले आफ्नै समुदायमाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए ।
उनीहरुले चीन सरकारले तत्काल मस्जिद भत्काउने काम बन्द गर्नुपर्ने र लामो समयदेखि शिन्जियाङमा रहेका उइगरहरुलाई दमन गर्ने, आतंकवाद फैलाएको आरोपमा कारबाही गर्ने, महिलाहरुलाई बच्चा नजन्माउन दबाब दिने र अस्थायी गर्भनिरोधक सामग्रीको प्रयोगका लागि दबाब दिने र हजारौंलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको कार्य रोक्नुपर्ने समेत माग गरेका छन् । संगठ्नले चीनले तत्काल यस्तो कार्य नरोके नेपालमा भएको चिनिँयाहरुले दुःख पाउने चेतावनी समेत दिएका थिए । तर, चीनले आफ्नो दम्भ देखाउन अझै रोकेको भने छैन ।
१८ लाख उइगुर मुस्लिमहरुलाई जेलमा तथा १० लाखलाई यातना केन्द्रमा राखिँँदा पनि किन विश्व जनमत चीनविरुद्ध उभिन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । पीडामा रहेका समुदायलाई नै चीनले मास्नेतर्फ लागेको उनीहरुको चिन्ता थियो ।
उइगुर समुदायमाथि चिनियाँ दमनको विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ र मुस्लिम समुदाय कस्ले उजुरी सुन्ने हो उनीहरुले गम्भीर प्रश्न उठाए । विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन भइरहँदा सामाजिक संजालमा पनि ह्यासट्यागमा उइगुर समुदायप्रति ऐक्यवद्धता प्रदर्शन भएको पाइएको छ ।
धेरैजसो मुस्लिम भएको उक्त समुदायका मानिसहरूलाई चीनले शिन्जियाङको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा रहेका शिविरमा थुनामा राखेको छ । त्यहाँ उनीहरूलाई यातना दिइएको, श्रममा लगाइएको र यौन दुव्र्यवहार गरेको भन्ने आरोप चीनमाथि लागेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
Previous articleचीनका ११ प्रान्तमा पुन: कोरोना संक्रमण
Next article६१ वर्षमा सिरहा विशेश्वर सदायले पाए नागरिकता